Dhageyso:-Laftagareen oo ka horyimid qorsho ay damacsan yihiin Madaxda Dowladda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dhageyso:-Laftagareen oo ka horyimid qorsho ay damacsan yihiin Madaxda Dowladda
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Koofur Galbeed C/casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ka horymid qosho muddo kororsi ah oo ay doonayaan inay sameeyeen Madaxda ugu sareysa Dowladda Soomaaliya.
Laftagareen ayaa soo bandhigey mowqifkiisa ku aadan doorashada soo socota ee Soomaaliya ee Sanadka 2020/2021,waxaana uu sheegay in mowqifkiisa uu yahay in 4.5 wax lagu doorto ilaa iyo inta la sameynaayo Tirakoob dadka ah,isla markaana doorashooyinkii horey dalka uga dhacay la qurxiyo.
“Ka mamul ahaan waxaan jeclaan lahaa doorashada in Soomaali inta tiradeeda laga ogaanayo deegaannada ay xuroobayaan in 4.5 wax lagu doorto laakin anaga ma dooneyno muddo kororsi mana jirto cid sSoomaali ah oo dooneysa ayuu yiri”Madaxweyne Lafta Gareen .
Hadalka Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa u muuqda mid ka hor imaanaya Wararka sheegayay in Madaxda Dowladda ay doonayaan muddo kororsi maadaama isaga uu ka mid yahay Maamul goboleedyada taagersan dowladda Soomaaliya.
← Wasiir Fowsiya oo sheegtay in uu ka baxsaday Nin ajanbi ah oo Gabar Dharbaaxay → Dagaal weli ka socda deegaan hoostaga Magaalada Baydhabo